China mara ụlọ ọrụ na-akọwapụta BT-9805 Manufacturer and Supplier | BGT
BT-9805 bụ arụmọrụ dị elu na sorbitol nke na-eme ka o doo anya na aha kemịkal nke DMDBS, bụ nke ọgbọ nke atọ.
Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9805bụ sorbitol dị elu na-arụ ọrụ nke ọgbọ nke atọ (DMDBS) ma nwee ike belata haze ma bulie nghọta nke polypropylene site na ngwakọta nke polymer. Nke a na - edugakwa n ’iwusi okpomoku ike, mee ka isi sie ike nke akụkụ a kpụrụ akpụ na obere oge okirikiri n’oge ịkpụzi ya. Ọ bụ odorless na ezigbo maka nri kọntaktị ngwa. Nke a na ụdị ngwaahịa ndị dị otú ahụ bughi usoro a mma site FDA anabata iji na kọntaktị nri na ụwa ahịa.
Ozi puru iche:
Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9805 enwere ike iji ya na mmepụta ihe nkpuchi, ọ nwere ike:
Mee ka nghọta doo anya nke PP.
Mee ka nchapụta nke PP gbazee.
Mee ka ike gwụ ike, mmetụta nkwụsị nke akwa gbazee-eyi.
Mee ka ndọtị gbazee iji mezuo ihe achọrọ maka akwa gbazee.
Iji BT-9805, ọrụ nwere ike iduzi agbakwunye eyi ihe maka amị okokụre ngwaahịa, eyi uzo masterbatch na dokwuo eyi. E nwere ọtụtụ ngwaahịa nwere ike mepụta gụnyere housewares, nchekwa ikpe, ndụ mgbabere uzo ikpe, mkpa-mgbidi containers na disposable sirinji na ghọta polypropylene ịkpụ kpụrụ karama maka pharmaceuticals, ngwa nri, ihe ọ ,ụ ,ụ, sauces, vitamin, na nwa karama wdg.
Nucleating gị n'ụlọnga bụ ụdị mmako nke kwesịrị ekwesị maka plastik crystallized ezughị ezu dị ka polypropylene na polyethylene. Site na-agbanwe crystallization omume nke resin na mee ngwangwa crystallization ọnụego, nwere ike nweta nzube nke shortening na ịkpụzi okirikiri, na-amụba doo anya elu gloss, rigidity, thermal deformation okpomọkụ, ike ọdụdọ na mmetụta na-eguzogide nke okokụre ngwaahịa.
Polymer gbanwetụrụ site Nucleating gị n'ụlọnga, Ọ bụghị nanị na ọ na-ejigide njirimara mbụ nke polymer, kamakwa nwere ọnụahịa arụmọrụ ka mma karịa ọtụtụ ihe nwere arụmọrụ nhazi dị mma na ọtụtụ ngwa. Iji Ngwunye Ngwunye na PP ọ bụghị naanị dochie iko, kamakwa dochie ndị ọzọ polymer dị ka PET, HD, PS, PVC, PC, wdg maka ịme mkpọ nri, mmejuputa ahụike, isiokwu ọdịnala maka iji ụbọchị, na-akọwapụta ihe mkpuchi na ihe ndị ọzọ dị elu.
Nke gara aga: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9803M
Osote: Na-akọwapụta Onye Ọrụ BT-9803